ပြေးခုန်ပစ် | Ministry of Sports
Institute of Sports and Physical Education (Yangon)
အားကစားနှင့်ပညာရေးပေါင်းစပ်သင်တန်းမှ သင်တန်းသား/သူများ၏ "ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲ" ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား
(၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်) လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသောအားကစားနည်းများ
Home » Athletes and Coaches » ပြေးခုန်ပစ်
လူ့သဘာဝအရ ပြေးခြင်း၊ ခုန်ခြင်း၊ ပစ်ခြင်းတို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာဦးစလူဖြစ်သည်မှ စ၍ ပေါ်ပေါက်ခဲ့စဉ်ကပင် ပြေးခုန်ပစ်လည်းပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်လာ သည်နှင့်အမျှ နောက်ပိုင်းတွင် သိပ္ပံနည်းကျနည်းစနစ်များ တိုးတက်ခြင်း၊ ပြိုင်ပွဲများတိုးတက်လာခြင်း၊ အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲအသွင် ဆောင်လာခဲ့ကြပါသည်။
ပြေးခုန်ပစ်အားကစားနည်းသည် အမျိုးအစားများပြားသလို နည်းပရိယာယ်နှင့် နည်းစနစ်ကို အားကိုးပြီး လျင်မြန်မှု ခွန်အားတို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်ကစားရသလို အမျိုးအစားကိုလိုက်၍ အခြေခံ လေ့ကျင့်ခန်းများရှိပြီး သန်မာသောကြွက်သားအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများစွာရှိသဖြင့် သေချာစွာ ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ပြေးခုန်ပစ်သမားကောင်းတစ်ယောက်တွင် ကျန်းမာသန်စွမ်း သော ခန္ဓာကိုယ်ရှိထားမှသာလျှင် ထူးချွန်သော ပြေးခုန်ပစ်အား ကစားသမားကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်)တွင် ၁၉၉ရခုနှစ်မှ ယခုအချိန်ထိ ကျား (၅၅)ဦး၊ မ(၅၅)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၁၀)ဦးဖြင့် သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်) ပြေးခုန်ပစ်အားကစားနည်းတွင် နည်းပြ ကျား (၆)ဦး၊ မ (၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၀)ဦးဖြင့် Event အလိုက် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်) ပြေးခုန်ပစ်အားကစားနည်း၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ
(က) နံနက်(၀၄း၃၀)နာရီအချိန် တာဝန်ကျဆရာမှ နှိုးခရာမှုတ်အိပ်ထခြင်း။
(ခ) နံနက်(၀၅း၁၅)နာရီအချိန် Training မသွားမီတန်းစီလူစစ်ဆေးခြင်းနှင့် မိမိအားကစားရုံသို့ တန်းစီထွက်ခွာခြင်း။
(ဂ) မိမိအားကစားရုံတွင် (၀၅း၃၀)နာရီမှ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ပြီး စားရိပ်သာ တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး အိပ်ဆောင်သို့ပြန်၍ ခေတ္တအနားပေးပြီး ကျောင်းတက်ရန် ပြင်ဆင်ကြပါသည်။
(ဃ) (ဝရး၃၀)နာရီအချိန် ကျောင်းတက်ရန်လူစစ်တန်းစီခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီးစာသင်ကြားရန် အတွက် ကျောင်းတက်ကြပါသည်။
(င) (၁၂း၃၀)နာရီအချိန်တွင် ကျောင်းလွှတ်ပြီး စားရိပ်သာတွင်နေ့လည်စာ သုံးဆောင်၍ အိပ်ဆောင်၌ ခေတ္တအနားယူခြင်း။
(စ) (၁၄းဝ၀)နာရီအချိန်တွင် တာဝန်ကျဆရာမှအိပ်ယာထပ်နှိုးခရာမှုတ်၍ Training သွားရန် ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း။
(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအချိန် Training မသွားမီတာဝန်ကျဆရာမှ တန်းစီလူစစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး မိမိအားကစားရုံကွင်းများသို့ စနစ်တကျတန်းစီသွားကြပါသည်။
(ဇ) (၁၄း၃၀)နာရီအချိန်မှ (၁၅းဝ၀)နာရီအချိန်ထိ မိမိလေ့ကျင့်ရေးရုံတွင် Mental Training များလေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
(စျ) (၁၅းဝ၀)နာရီအချိန်တွင် မိမိအားကစားနည်းအလိုက် Training plan အတိုင်း လေ့ကျင့်မှု များ ပြုလုပ်ပြီး (၁ရး၁၅)နာရီအချိန်လေ့ကျင့်မှုရပ်နားပြီး (၁၅)မိနစ်၊ ရုံပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးများပြုလုပ်ပြီး၊ ညနေစာသုံးဆောင်ရန်အတွက် ခေတ္တ ရပ်နားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(ည) ညနေစာကို (၁၈းဝ၀)နာရီအချိန်မှ (၁၉းဝ၀)နာရီအချိန်ထိ ညနေစာသုံးဆောင်၍ (၁၉းဝ၀) နာရီအချိန် ညစာကြည့်ရန်အတွက် တာဝန်ကျဆရာများမှ ပြန်လည်တန်းစီလူစစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ပြီး (၁၉းဝ၀)နာရီမှ (၂၁းဝ၀)အချိန်ထိ ညစာကျက်၍ (၂ဝးဝ၀)နာရီအချိန်တွင် တာဝန်ကျဆရာများမှ ပြန်လည်တန်းစီလူစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ပြီး နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ် နှင့် လိုအပ်တာများမှာကြားပြီးတစ်နေ့တာပြီးဆုံးခြင်းနှင့် ပြီးစေတန်းဖြုတ်ခြင်း၊ အိပ်စက် အနားယူရန်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် (၂ဝးဝ၀)နာရီအချိန် မီးမှိတ်ခရာမှုတ်၍ အိပ်စက် အနားယူခြင်း၊ တစ်နေ့တာပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Office Ph : 540684, 400006
Fax : 400891
Site Visitors : 000,
© Copyright 2014-2019. All Rights Reserved. Sports & Physical Education Department